Ukucoca, unyango okanye ukucoca yinkqubo ebonakala ngathi inzima enokwenziwa, umzekelo, kusetyenziswa iikhemikhali.
Ngapha koko, ukusetyenziswa kwe Izibane ze-UV ze-UV Yenza iimveliso zeAcuva zibe sisisombululo esifanelekileyo hayi kuphela ekhaya naseofisini, kodwa kukwalungele nokucoca amanzi kwi-yacht okanye kwikampu.
Amanzi kuphela ahlanjululwa ngenxa yoko I-99,9999% yeebhaktiriya, iintsholongwane kunye nazo zonke ezinye iintsholongwane ziyasuswaezinokubangela iingxaki zempilo kwaye ziya kuthi zingene ngokulula nakweyiphi na isihluzo samanzi esintu.
I-Acuva Arrow 5 UV-LED - isicoci samanzi ngempompo
Iwaranti yeminyaka eli-10 +
I-Acuva Arrow 5 UV-LED - isicoci samanzi
I-Acuve ibonelela ngeemveliso ezilungiselelwe phantse lonke uhlobo lokusetyenziswa. Ukusuka kuluhlu olubanzi lokucoca amanzi e-UV-LED, unokukhetha izixhobo ezinomthamo weelitha ezi-5 ngomzuzu kunye nobomi benkonzo yeelitha ezingama-900.
I-Acuva Eco NX-Isilivere ye-UV-i-LED - isicoci samanzi ngempompo
Yeka ukukhathazeka ngamanzi asebhotileni kwi yacht yakho okanye ikharavani. Sebenzisa amanzi angekho kumgca kwaye uwanyange ngaphambi kokuba usele usebenzisa iAcuve UV-LED Inkqubo yokuCoca. Yonwabela amanzi acocekileyo angenampompo kwisikhephe sakho nakwikhampasi yakho okanye kwikhaya leholide ngaphandle konikezelo lwamanzi.
Ukukhetha iinkqubo zokucoca amanzi Acuva Nge-UV-LED, ukhetha iimveliso ezisemgangathweni ophezulu ezibonelela ngamanzi acocekileyo, angenazintsholongwane ekhayeni lakho, kwisikhephe okanye kwisithuthi.
5 / 5 ( 3 iivoti )